I-Apple izothengisa ama-iPhones ayizigidi ezingama-227,5 kulo nyaka | Izindaba zamagajethi
I-Apple ithengise ama-iPhones ayizigidi ezingama-227,5 kulo nyaka
UJoseph Alfocea | | Izaziso
Inkampani yokucwaninga nokuhlaziya imakethe I-TrendForce usho embikweni ukuthi I-Apple izothengisa cishe amadivayisi we-iPhone ayizigidi ezingama-227,5 kulo nyaka, okungasho ukukhula ngo-5,6% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule.
Ngaphezu kwalokho, lezi zibalo zizoveza ukukhula okungaba ngaphezu kokukhula okujwayelekile komkhakha yama-smartphones, alinganiselwa kumaphesenti angu-4,8 kulo nyaka.
Isikrini se-OLED se-iPhone X, ukhiye kulokhu kukhula
Ngokusho kweTrendForce, i-Apple izothengisa ama-iPhones ayizigidi ezingama-227,5 kulo nyaka, okuzomela ukukhula ngo-5,6% ngonyaka odlule, kanye no-0,8% ngaphezu kokukhula okujwayelekile komkhakha we-smartphone womhlaba wonke. Inkampani inethemba lokuthi ukuthengiswa kwemodeli ye-iPhone X, okuthi, ngokubikezela, okuzohlanganisa isikrini se-OLED, akubalulekile ku-Apple kuphelakepha yonke imboni ye-smartphone iyonke.
Phakathi kwamamodeli amathathu we-iPhone 10th azokhishwa, imodeli ye-5,8-inch premium izofika nesibonisi se-AMOLED. Ukwethulwa kwe-AMOLED iPhone kuzosiza ukusheshisa ukwamukelwa kwe-AMOLED emakethe ye-smartphone. I-TrendForce ibikezela ukuthi cishe ama-43% ama-smartphones athunyelwe emhlabeni wonke ngo-2020 azofaka isibonisi se-AMOLED.
Futhi, yize i-Apple kungeyona inkampani yokuqala ngaso sonke isikhathi ukwamukela ubuchwepheshe obusha, imvamisa iyona eqhuba ukwamukelwa okubanzi kobuchwepheshe obunjalo, futhi yilokhu okuzokwenzeka ngokweTrendForce.
Ngakolunye uhlangothi iTrendForce nayo ilindele ukuthi ubuchwepheshe bokuqashelwa ubuso, okungabizwa nge-Face ID, nakho kunomthelela ofanayo ekwamukelweni kwalobu buchwepheshe kuyo yonke i-secot.
Inani eliphelele lemakethe yomhlaba lamamojula we-3D sensing asetshenziswa kumadivayisi eselula kulinganiselwa ukuthi lizofinyelela ku- $ 1.500 billion ngo-2017 futhi kulindeleke ukuthi libone ukukhula okukhulu kuka-209% kuye cishe ku- $ 14.000 billion ngo-2020.
Ekugcineni, i-Strategy Analytics iphawula lokho I-Apple ithumele inani eliphelele lama-iPhones ayi-1.200 billion kusuka kumodeli yasekuqaleni ngo-2007 kuya kwikota yesibili ka-2017.
Futhi ngenkathi izibikezelo zokuthengiswa kwephuzu elilandelayo le-iPhone lokuqopha izibalo, eSteve Jobs Theatre umshicileli usuvele ufinyelela ngaphakathi futhi cishe yonke into isilungele i-Keynote ye-iPhone X esizokwazisa ngayo ngokufanele ku-Actualidad Gadget.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-Apple ithengise ama-iPhones ayizigidi ezingama-227,5 kulo nyaka
Landela i-Apple Keynote bukhoma nathi
I-Apple's Wireless Charging Pad akuyona i-Keynote Ready ku-iPhone X